10 Ọtụtụ echiche dị mma na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ọtụtụ echiche dị mma na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 13/11/2020)
Ndagwurugwu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ulo elu, na obodo mara mma, Europe nwere ọtụtụ pụtara ebe ileta. Onye ọ bụla na ebe ọ bụla ga-eme ka ọ dị gị ka ị banyela n’ime ụmụnna’ Akụkọ ọjọọ, na 10 echiche kachasị mma na Europe bụ ọnọdụ zuru oke maka akụkọ ifo.
1. Echiche Kasị Mma Na France: Ndagwurugwu Dordogne
Ugwu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, osimiri Dordogne mara mma, na 5 obodo nta ndị natara “obodo kachasị mma na France” award make the Dordogne valley’s one of the beautiful views in Europe. Castelnaud is one of the most charming castles in France, dị na mpaghara obodo ojii Perigord. Obodo ndị dị na ndagwurugwu Dordogne adịgidebeghị n'oge, ma ka ị na-agagharị n'okporo ụzọ na n'okporo ámá, ị ga-eche na ị laghachila n'oge ka ndị ọchị na akụkọ ifo.
Echiche kachasị mma na France bụ iji ụgbọ okporo ígwè. Nwere ike ịzụ njem si Bordeaux na-erughị 2 awa, ma ọ bụ site na Paris na ihe na-erughị 6 awa. Mpaghara a mara mma bara uru karịa njem ụbọchị.
Nantes na Bordeaux Zụọ Ahịa
Paris na Bordeaux Zụọ Ahịa
Lyon ka Bordeaux Zụọ Ahịa
Marseilles na Bordeaux Zụọ Ahịa
2. Vernazza, Cinque Terre Hiking nzọ ụkwụ
The echiche nke ọmarịcha obodo Vernazza na Cinque Terre bụ otu n'ime 10 echiche kachasị mma na Europe. Obodo a mara mma bụ otu n'ime 5 obodo nta, nke gunyere mpaghara di ebube nke Cinque Terre. Lọ ndị mara mma dị n’azụ Oké Osimiri Mediterenian na-acha anụnụ anụnụ, kee eserese-dika ele, nke kachasị mma na ọdịda anyanwụ.
I nwere ike na-enwe mmasị a ọmarịcha echiche si Cinque Terre hiking nzọ ụkwụ echiche nke na-ejikọ ihe niile 5 obodo nta. Ka ị na-arịgharị n'okporo ụzọ ahụ, ị ga-ahụ ubi vaịn, ụgbọ mmiri azụ, na Cinque Terre n’ịma mma ya niile. Ọ ka mma gaa na Cinque Terre na mmiri na Fall ebe ọ bụ na n'oge okpomọkụ ihu igwe ọkọkpọhi nnọọ iru mmiri maka hiking, na oyi, a pụrụ igbochi ụzọ ahụ.
Corniglia na Vernazza Zụọ Ahịa
Florence na Vernazza Zụọ Ahịa
Bologna na Vernazza Zụọ Ahịa
Riomaggiore gaa Vernazza Train Prices
3. Echiche Kachasị Ihe Nlere Na Switzerland: Rochers De Naye
Echiche Switzerland emewo ka ọtụtụ fim na ndị na-ese ihe si n'ike mmụọ nsọ mee ihe, na mgbe ị gara na mpaghara Rochers De Naye na Vaud, ị ga-aghọta ihe kpatara ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị njem na-arịgo elu ugwu Malatraix, enwere n'ezie echiche ndị ọzọ na-akpali akpali site na Rocher-De-Naye.
Ozugbo elu ị ga-ele Lake Lake na snowy ọnụ ọnụ nke ugwu Switzerland n'azụ. Echiche mara mma a na Rocher-De-Naye zuru oke maka ọdịda anyanwụ ma ọ bụ pịkụl ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite njem ụtụtụ n'isi ụtụtụ..
Lyon Airport ka Geneva Zụọ Ahịa
Zurich na Geneva Zụọ Ahịa
Paris na Geneva Zụọ Ahịa
Lucerne na Geneva Zụọ Ahịa
4. Mpaghara Mullerthal
Mullerthal Region has the loveliest views in Luxembourg. Rocky formations, nsụda mmiri, na ụzọ ndụ ndụ ịhọrọ site na, ọ bụ paradise hiking. A na-akpọ Mullerthal dị ka Little Switzerland, ekele ya ịtụnanya odida obodo.
Echiche mara mma kachasị mma na Luxembourg bụ Osimiri Sure na ogige okike Upper-Sure. Can nwere ike ịnụ ụtọ ebe a na-akpali akpali site na ịrịgo elu Lezọ okporo ụzọ Mullerthal 1. Zọ njem a na-ewe ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ, Lọ Tudor, eme ka ọ bụrụ otu n'ime 10 echiche kachasị mma na Europe.
Antwerp na Luxembourg Zụọ Ahịa
Brussels ka Luxembourg Zụọ Ahịa
Metz na Luxembourg Zụọ Ahịa
Paris na Luxembourg Zụọ Ahịa
5. Echiche Kachasị Mma Na Czech Republic: Moravian Tuscany
Ogige silk dị ka ahịhịa ndụ awara awara, mpaghara Moravia dị na Czech Republic na-adọrọ mmasị. Green ke ndaeyo, blooming, na yi na mmiri, agba nke Moravian Tuscany na-agbanwe na oge nke afọ. Ya mere, oge obula ị gara Moravia, ị ga-enweta echiche dị iche iche kpamkpam nke ejima Tuscany.
Echiche a dị ịtụnanya na Europe bụ njem ụbọchị site na Prague. Obodo ndị mara mma nke Sardice, na Karlin na Morave, na-enye echiche kacha mma nke ala Moravian.
Farmlọ ebe a na-akọ osisi n'ọhịa dị n'azụ ugwu ndị snow na-ekpuchi, Obodo Alpbach mara mma. Obere obere obodo mara mma nke Alpbach dị na otu n’ime mpaghara Austria kachasị mma: Tyrol. Mmiri mmiri dị egwu, hiking ụzọ ụkwụ maka ahụmahụ hikers ma ọ bụ ezinụlọ na ụmụaka, enwere ọtụtụ ụzọ iji nyochaa ọdịdị Austrian na ọdịdị.
Na mgbakwunye, ị nwere ike ịbanye na ọdọ mmiri kachasị mma Austria, nke na-hụrụ nso a mara mma agbaga obodo. Echiche mara mma nke Alpbach na Austria bụ obere ụgbọ okporo ígwè pụọ n'ọdụ ụgbọ elu.
Vienna na Landeck Ischgl Zụọ Ahịa
Munich na Landeck Ischgl Zụọ Ahịa
Salzburg na Landeck Ischgl Zụọ Ahịa
Zurich na Landeck Ischgl Ọnụ Ahịa
7. Echiche Kasị Mma Na Germany: Neuschwanstein Castle
Ndepụta nke echiche dị egwu nke Europe agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na enweghị ụlọ nke nnukwu ụlọ. Nnukwu Neuschwanstein dị na Germany bụ ụlọ ndị kasị adọrọ mmasị na Germany ma na-enye otu n’ime echiche kachasị anwansi na Europe.
Echiche kachasị ewu ewu nke Castle Neuschwanstein sitere na akwa mmiri Mary. Otú ọ dị, ọ na-akawanye mma juru na ọ fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume snap a picture si ama ele ihe anya. Ya mere, ị kwesịrị ị na-arịgo ugwu ahụ ma gafere echiche Marienbrucke. Echiche kachasị mma na Germany bụ ụzọ zig-zag, site n'elu ikpo okwu.
Dusseldorf na Munich Zụọ Ahịa
Dresden na Munich Zụọ Ahịa
Nuremberg na Munich Zụọ Ahịa
Bonn na Munich Zụọ Ahịa
8. Mba netherland, Obodo Zaanstad
A ma Holland ama maka tulips na ikuku, ọwa mmiri, na obodo mara mma. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na otu n'ime echiche kachasị mma na Netherlands nwere ma. Y’oburu n’inwere obi oma iga njem n’oge opupu ihe ubi, ị ga-aga ileta obodo nta nke Zaanstad. N'ebe a, ị ga-ahụ windmill ifịk ifịk na ifuru tulips na agba niile nke egwurugwu.
Bremen ka Amsterdam Zụọ Ahịa
Hannover na Amsterdam Zụọ Ahịa
Bielefeld na Amsterdam Zụọ Ahịa
Hamburg ka Amsterdam Zụọ Ahịa
9. Echiche Kachasị Mma Na Hungary: Gellertberg Hill Na Budapest
Echiche nke ndị omeiwu Hungary bụ otu n'ime ihe oyiyi ama ama nke Budapest. Nwere ike wepu echiche a na-akpali akpali site na Gellertberg Hill. na 235 m, ị ga-enwe ike ịhụ Osimiri Danube na panoramic dị egwu nke Budapest.
Na oroma anyanwụ dara na agba, ọkụ abalị, ma ọ bụ na a doro anya-acha anụnụ anụnụ na mbara igwe ụbọchị, echiche dị ebube. N'ihi ya, Echiche Gellertberg Hill emeela ka ọ bụrụ nke anyị 10 echiche kachasị mma na Europe.
10. Chateau De Crevecoeur Na Nri
Obodo sinik nke Dinant bụ otu n'ime obodo kachasị mma na obodo pụrụ iche na Europe. Echiche mara mma nke Dinant, ụka, osimiri, na ndagwurugwu Meuse si na Chateau de Crevecoeur, Obí obi mgbawa.
Na-achị ala ala okwute mara mma, nnukwu ụlọ a lekwasịrị anya Dinant kemgbe narị afọ nke 13.
Brussels ka nri abalị Zụọ Ahịa
Antwerp ka Dinant ụgbọ Ahịa
Ghent ka nri abalị Train Ahịa
Liege ka nri abalị Train Ahịa
The 10 echiche ndị mara mma na Europe bụ ugwu ugwu na-acha akwụkwọ ndụ, ebe naanị ndị nwere obi ike na-atụ anya ịga. Nke kachasị iche, Echiche ndị Europe na-echere ndị na-achọ ihe pụrụ iche, ebe a na-egbu-egbu, ma pụọ ​​n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike gị na 10 kasị mara mma echiche na Europe ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Ọtụtụ Kasị Mma Echiche Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
BeuatifulViewpoints BreathtakingViews EuropeByTrain Train Travel TravelingbyTrain echiche